QANDA: 5s သင်္ချာရှာရန်ဖြေရှင်းခြင်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » QANDA: 5s သင်္ချာရှာရန်ဖြေရှင်းခြင်း
QANDA: 5s သင်္ချာရှာရန် APK ကိုဖြေရှင်းခြင်း
သင်တိုဆုံးအချိန်အတွက်လိုအပ်သောအဖြေကိုရဖို့ကကူညီနိုင်သည့်တစ်စမတ် app ကို။ Qanda အနေနဲ့အသိဉာဏ်နှင့် Real-time အမေးအဖြေသောအသိပညာစိတ်ကူးမေတ္တာတစ်ဦးကစနစ်ဖြစ်သည်။
Mathpresso ကုမ္ပဏီအားဖြင့်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းအဆိုပါ Qanda app ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားများကိုပဲသူတို့လေ့လာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းမေးခွန်းများကိုတွေ့ဆုံရန်အချိန်တွင်နာမည်ကျော်ဆရာများနှင့်အတူ Real-time ဆက်သွယ်ရေးရှိသည်ဖို့ကူညီခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှသောမေးခွန်းများကိုများအတွက်အမြန်ဆုံးနှင့်လိုအပ်အဖြေကိုရရှိရန်နိုငျသောစမတ်လေ့လာနေပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် သူတို့နှင့်အတူတက်လာ။ ထိုအသင်ပြုရန်ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောအရာစူပါလွယ်ကူပါတယ် - ပဲသင်၏မေးခွန်းတစ်ခုအမြန်ဓာတ်ပုံကိုယူနှင့်က upload တင်။ ထိုအခါသင်တို့သည်ဤကျော်ကြားသောဆရာ, ဆရာမများထံမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြေကိုရနိုင်သည်။ ဒီစမတ်ကို real-time Q & A စနစ်ကအပြင်, ငါတို့သည်လည်းအရည်အသွေးမြင့် core ကိုလေ့လာမှု contents တွေကိုနှင့်အတူအသုံးပြုသူများအပေးနဲ့သူတို့ရဲ့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပုံစံနှင့်အသိပညာအားနည်းခြင်းကိုရှာဖွေကျောင်းသားများကိုကူညီပေးဖို့အလိုအလျှောက် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပါ။ ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားများကိုဆိုင်တဲ့နှင့်ထိထိရောက်ရောက်လေ့လာဖို့နိုင်ကြသည်။ သင်ဆဲအဟောင်းလေ့လာနေနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုနေသလား အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်နှင့်ထိရောက်သောပညာရေး mode ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသည်မဟုတ်လော အကြှနျုပျတို့သညျကခစျြလိမျ့မညျသေချာ: simple_smile:
လျင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကျော်ဆရာများနှင့်အတူလေ့လာဖို့ Qanda ထံသို့လာကွ!
•သင်ဆဲသောကြောင့်, တစ်ဦးတည်းလေ့လာနေ၏အထီးကျန်ခံစားရပါသလော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Qanda လာ. တွေ့ကြုံခံစား - နောက်ဆုံးပေါ်ပညာပေးနည်းလမ်းများ။ ရုံသင်၏မေးခွန်းတစ်ခုအမြန်ဓာတ်ပုံကိုယူ, သင်အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကျော်ဆရာများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြေတွေကိုနဲ့ Real-time ဆက်သွယ်ရေးရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကောင်းတစ်လမ်းများအတွက်, သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသနည်း
•သင်ဆဲငွီးငှေ့ဖှယျနှင့်ငြီးငွေ့စရာပြဌာန်းစာအုပ်ဖတ်နေနှင့်အိပ်ချင်ခံစားရဖူးပါသလား, အဘယ်ကြောင့်အလွန်ရှင်းလင်းသောအမျိုးအစားတို့နှင့်ကြီးသောအကြောင်းအရာရှိသည်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပို့စ်များကိုမကြိုးစား။ ဒါဟာကျိန်းသေသင်အချိန်အများကြီးကိုကယ်တင်နှင့်ထိထိရောက်ရောက် stuy ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
•သင်ဆဲသင့်ရဲ့စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်နေပါသလား သငျသညျစာမေးပွဲများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်ဘယ်အရာကိုမသိကြသလော Qanda သင့်ကိုပြောပြမှာပါစို့။ Qanda သင်၏မေးခွန်းပုံစံနှင့်အသိပညာအားနည်းခြင်း detect လုပ်ဖို့အလိုအလျှောက် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုသည်။ ထိုကြောင့်သင်သည်အတိုဆုံးအချိန်အတွက်အလွန်အမင်းထိထိရောက်ရောက်သင့်ရဲ့စာမေးပွဲဖြေဆိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်လေ့လာမှုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောအစီအစဉ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
•သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂလိကနည်းပြဆရာအဖြစ်ကျော်ကြားဆရာများငှားရမ်းရန်လိုပါသလား? သင်ဆဲသူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ဒုက္ခရှိခြင်းပါသလား? Qanda ပြီးသားသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ သင်ရုံမဆိုအခက်အခဲများမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ platform ပေါ်တွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
QANDA: 5s သင်္ချာရှာရန်ဖြေရှင်းခြင်း
18.60 ကို MB
လွယ်ကူသောလေ့လာမှု - သင်၏ ...